ग्रुमिंग ग्लोभ्स मिट्स निर्माणकर्ता र आपूर्तिकर्ता | चीन ग्रुमिंग ग्लोभ्स मिट्स फैक्टरी
पाल्तु जनावर ग्रुमिंग शेडिंग ग्लोभ
१. हाम्रो पाँच औंलाहरू पाल्तु जनावर कोर्निग ग्लोभले मात्र हावामा उडान कपाल घटाउन मद्दत गर्दैन, यसले छालाको तेललाई पनि उत्प्रेरित गर्दछ र घरपालुवा जनावरको कोट नरमता र चमकमा सुधार गर्दछ।
२. यो पाँचवटा औंलाहरूका नरम सुझावहरूले पाल्तु जनावर सजिलै पाल्दछन् पाल्तु जनावर सजिलै सँगै जान्छन्, दायाँ लम्बाइ नबले कपाललाई तान्न र फ्याक्न सजिलो बनाउँदछ।
A.संस्करणमा तपाईसँग सानो वा ठूलो कलाई छ वा छैन, यो ग्रुमिंग ग्लोभ फिट गर्नको लागि बनाईएको हो। गुणस्तरको पट्टाले सबैलाई मनपर्ने आकारको लागि पूर्ण रूपमा उपयुक्त बनाउँदछ।
I. यो लामो कपाल भएको वा छोटो र घुमाउरो कपाल कुकुर र बिरालाहरूका लागि उत्तम छ। यो सबै आकार र नस्लहरूका लागि उत्कृष्ट पाल्तु कपाल हटाउने हो।
घरपालुवा जनावर कपाल हटाउने पन्जा
१. रब्बर सल्लाहहरूले कोमल आराम दिने मसाज प्रदान गर्दछ। यी पालतू कपाल हटाउने पञ्जा संवेदनशील र जवान पाल्तु जनावरहरूको लागि उपयुक्त छ।
२.यो पालतू जनावरको कपाल हटाउने पञ्जाको सामग्री लचिलो र सास फेर्न मिल्छ, समायोज्य नाडी पट्टा अधिकांश पाल्तु जनावर मालिकहरूलाई फिट गर्दछ।
G.ग्लोभको भेल साइडले प्रभावकारी ढ hair्गले फर्निचर, कपडा वा कारमा राखिएको कपालको मात्रा कम गर्दछ।
The. पाल्तु जनावरको कपाल हटाउने पन्जाले बिरालो, कुकुर, घोडा वा अन्य जनावरहरूको फोहोर, रander्ग र छाडा कपाल हटाउँछ।
पाल्तु जनावरको मसाज कोठाका दस्ताने
घरपालुवा जनावरहरूलाई कोप टिप-टप सर्तमा राख्न नियमित पोशाक चाहिन्छ। ग्रूमिंग सजिलै मृत र छाडा कपाल हटाउँछ। घरपालुवा जनावरको मालिश गरीने पन्जाले कोटलाई पोलिश र सुशोभित गर्‍यो, ट्याang्गलहरू हटाउँदछ र कपालको कणहरूलाई उत्तेजित पार्दै स्वास्थ्य र पुनःप्रोथलाई बढावा दिन्छ।
कुकुरहरूका लागि पाल्तु शेडिंग ग्लोभ
१. यो तपाईंको बगाउने घरपालुवा जनावरहरूलाई च्यात्नु सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा रमाईलो तरिका हो। कुकुरहरूका लागि घरपालुवा जनावरको बहाउने ग्लोभले फोहर ट्या t्गलहरू र म्याटहरू फिक्स गर्दछ जबकि फोहोर उठाउँदा र कोटबाट खस्राउँछ।
२.यो समायोज्य रिस्टब्यान्डले पन्जालाई सुरक्षित रूपमा तपाइँको हातमा कडा बनाइदिन्छ जब कि संग्रहालयमा राखिन्छ।
The. गोलो हेड पिनको डिजाइन उचित छ, जो मालिश गर्ने कार्य पाल्तु जनावरहरूका लागि नुहाउन सक्छ।
Dogs. कुकुरहरूका लागि पाल्तु पशु बहाउने पन्जाले उनीहरूको दैनिक पोशाक आवश्यकताहरू प्रदान गरेर स्वस्थ र सफा राख्छ।
कुकुर स्नान शेडिंग ग्लोभ
कुकुरको स्नान शेडिंग ग्लोभमा प्राकृतिक रबर ब्रिस्टलले छाडा कपाल हटाउँदछ र छालाको मालिस गर्दछ,
इको कपडा वाइपले खुट्टा र अनुहार वरिपरि गडबडी सफा गर्दछ।
समायोज्य पट्टा सबै हात आकार र आकार फिट गर्दछ। कुकुर स्नान शेडिंग पट्टी गीला वा सुक्खा प्रयोग गर्न सकिन्छ, कपाल मात्र छीलो।
कुकुर स्नान बहाउने पञ्जा टिकाऊ र दिगो हुन्छ र मशिन धुन्छ।